Shina 3 way factory factory sy mpanamboatra | Nortech
Inona ny valizy baolina 3 lalana?
Lafiny lehibe an'ny valizy baolina 3 fomba NORTECH
1, valizy baolina telo-pneumatika, valizy baolina telo-lalana amin'ny firafitry ny fampiasana rafitra miharo, lafiny 4 amin'ny karazana famehezana seza valizy, tsy dia azo itokisana, famolavolana hahatratrarana ny maivana
2, valizy telo lalana vita amin'ny fiainana lava be, fahaiza-mikoriana lehibe, fanoherana kely
3, valizy baolina telo lalana arakaraka ny andraikitry ny karazana roa tokana sy roa, karazana fiasa tokana dia miavaka amin'ny tsy fahombiazan'ny loharanom-pahefana, ny valizy baolina dia ao amin'ny rafitra fitakiana fanaraha-mason'ny fanjakana.
Ny valizy sy ny vavahady vavahady dia karazana valizy ihany, ny maha samy hafa azy dia ny baolina fanidiana azy, ny baolina manodidina ny tsipika afovoan'ny vatan'ny valva ho an'ny fihodinana hanokatra sy hanidiana valizy. Ny valizy baolina ao amin'ny fantsom-panafody dia matetika ampiasaina hanapahana, fizarana ary hanovana ny fitarihan'ny mpanelanelana. Ball Valve dia karazana valizy vaovao izay be mpampiasa.
Famaritana ara-teknika an'ny valizy baolina 3 NORTECH
Ny valva rehetra dia natao hanarahana ny fepetra takian'ny ASME B16.34, ary ny ASME ary koa ny fangatahan'ny mpanjifa.
Gear, Electric, Cylinder, Pneumatika, Hydraulika, Lever, Kodiarana rojo
Fiantohana kalitao (QA):
Ny dingana rehetra manomboka amin'ny famokarana amin'ny alàlan'ny famokarana, welding, fivoriana, fanandramana ary ny fonosana dia mifanaraka amin'ny programa kalitao
sy fomba fiasa (boky torolàlana ASME Fizarana III ary boky torolalana ISO 9001).
Fanaraha-maso kalitao (QC):
Ny QC dia tompon'andraikitra amin'ny lafin'ny kalitao rehetra, manomboka amin'ny fahazoana fitaovana ka hatramin'ny fifehezana ny milina, welding, tsy miteraka fanodikodinana
fanadinana, fivoriambe, fitsapana ny tsindry, fanadiovana, hosodoko ary fonosana.
Fitsapana ny fanerena:
Ny valva tsirairay dia voasedra amin'ny tsindry mifanaraka amin'ny API 6D, API 598, na ny fangatahan'ny mpanjifa manokana raha azo ampiharina.
Product Show: valizy baolina 3 lalana
Inona no ampiasaina amin'ny valizy baolina 3 fomba?
Ity karazana ity Valizy baolina 3 lalana dia be mpampiasa amin'ny fantsom-panafody no tena ampiasaina hanapahana, hizarana ary hanovana ny fitarihan'ny mpanelanelana. Ankoatr'izay, amin'ny actuator elektrika marolafy, ny mpanelanelana dia azo ahitsy ary tapahina mafy. Ampiasaina betsaka amin'ny solika, indostrian'ny simika, famatsian-drano an-tanàn-dehibe ary ny fantsakana mitaky fahatapahana henjana.
Teo aloha: Valve plug-3
Manaraka: API Aluminium Double / Triple Offset Lug / Wafer / Flange Butterfly Valve Petrochemical Industry China orinasa
Valan-javaboary baolina 3 way china
Valizy baolina 3 lalana, orinasa mpamokatra volo baolina 3